खानेपानी लिन पनि भारत जान बाध्य नेपाली ! - Everest Dainik - News from Nepal
खानेपानी लिन पनि भारत जान बाध्य नेपाली !
दाङ, असोज ७ । नेपालीहरु भारतीय सीमवर्ती बजारमा सामान किनमेलका लागि जानु नौलो कुरा होइन । त दाङ जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्र कोईलाबासका स्थानीयलाई भने खानेपानीका लागिसमेत भारत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सो क्षेत्रका प्रदेश सांसद ईन्द्रजित थारुले बर्षौंदेखि कोईलाबासकाा स्थानीयले भारतीय सुरक्षा फोर्स एसएसबीले गाडेको बोरिङबाट पानी ल्याएर गुजारा चलाउँदै आएका छन्।
बेलाबेलामा भारतीइ पक्षले त्यही पानी पनि बन्द गरिदिन्छ। नेपालीलाई पानी दिएबापत एसएसबीले नेपालको बिजुली प्रयोग गरेको छ । गत चैतमा विधुत् महशुलका विषयमा विवाद हुँदा पानी दिन बन्द गरिदिएपछि कोईलाबास काकाकुल बनेको थियो ।
सभासद थारुका अनुसार करिव दुई सय घरपरिवार रहेको कोईलाबासमा अहिलेसम्म खानेपानीका लागि एउटा मात्रै बोरिङ छ ।त्यही बोरिङ पनि गर्मीयाममा सुक्छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
याे पनि पढ्नुस तीन लाख रुपैयाँसहित १२ जुवाडे पक्राउ
ट्याग्स: dang, Panee